Puntland oo Warsaxaafadeed ka soo saartay Iska horimaad shalay ka dhacay buuraha Galgala
Boosaaso:-Warsaxaafadeed ka soo baxay Dowlada Puntland ayaa lagu sheegay in weerar ay soo qaadeen ciidamo ka tirsan Al-Shabaab oo ka dhacay Buuralayda Galgala ay ku dileen 3 askari oo ka tirsan Al-Shabaab waxaana sidoo kale warsaxaafadeedka ay Puntland ku sheegtay in ay dhaawaceen 5 kale.
Ilaa haatan ma jiraan cid ka tirsan Al-Shabaab oo ka hadlay iska horimaadka ka dhacay shalay Buuraha Galgala.
Warsaxaafadeedka ay soo saareen Puntland ayaa waxaa uu u qornaa sidan.
Hal askari oo ka tirsanaa Ciidamada Dowladda Puntland ayaa ku shahiiday weerarkaasi gardaradda ahaa Dhanka kale, maalin-nimadii Jan. 3, 2013, ayaa Ciidamada Puntland waxay qabteen nin ka tirsan kooxda Al Shabaab isagoo dhulka ku aasaya bambo.
Xogta sirdoonka ayaa cadaynaysa in kooxda argagaxisada Al Shabaab taageero dhaqaale ay ka hesho lacagaha madaxfurasho ay qaataan burcad-badeeda, iyadoo burcad-badeeda ay xiriir toos ah la leeyihiin kooxda Al Shabaab oo jabmilitari iyo burbur dhaqaale soo foodsaartay muddoyinkii dambe.
Dowladda Puntland ayaa si wayn u cambaaraynaysa lacagaha madaxfurasho ay qaataan burcad-badeeda waxayna Dowladda Puntland ugu baaqaysaa BeeshaCaalamka in si degdeg ah loo joojiyo bixinta lacagaha madaxfurasho oo taageero dhaqaale u ah kooxaha burcad-badeeda iyo argagaxisada Al Shabaab.
Warsaxaafadeed Puntland ka soo saartay iska horimaad ka dhacay Laag